ကိုယ် အလေးချိန် ၁၀၀၈ ပေါင်ရှိချင်သူ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » ကိုယ် အလေးချိန် ၁၀၀၈ ပေါင်ရှိချင်သူ
ကိုယ် အလေးချိန် ၁၀၀၈ ပေါင်ရှိချင်သူ
Posted by မမလေး on May 4, 2011 in Copy/Paste, News | 14 comments
နယူးဂျာစီရဲ့ တံတားဟောင်း မြို့နယ်မှာ နေထိုင်တဲ့ အသက် ၄၄နှစ် အရွယ် အရပ် ၅ပေ ၄ လက်မရှိ ဒေါနာစင်မ်ဆန်ဟာ ကိုယ် အလေးချိန် ၆၀၂ ပေါင်ရှိနေ ပြီး ၁၀ဝ၈ ပေါင်အထိ ဝလာစေရန် ကြိုးစားနေပါတယ်။ အဲဒီအလေးချိန်ရဖို့အတွက် သူမဟာ တစ်နေ့လျှင် ကယ်လိုရီ ၁၂၀ဝ၀ ကို နေ့စဉ်စား သုံးနေရပါ တယ်။ သူမ ဆူရှီ အခု ၇၀ ကို တစ်ထိုင်တည်း စားပစ်နေပါတယ်။ သူမဟာရဲ့ ပထမအိမ်ထောင်မှ အမျိုးသားက စားဖိုမှူးတစ်ယောက် ဖြစ်ပြီး သူအလုပ်လုပ်တဲ့ စားသောက် ဆိုင်က အစားအစာ အပိုတွေကို အိမ်သို့ယူလာလေ့ရှိပါတယ်။ သူမဟာ အဲဒီ အစားကောင်းသောက်ဖွယ်အပို တွေကိုစားပြီး ကိုယ်အလေးချိန် စတင် တက်လာပါတယ်။ သူတို့နှစ်ဦး ကွာရှင်းပြီး မကြာခင်မှာပဲ သားဦးလေး ဒက်ဗင်ကို မွေးဖွား ခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီ နောက်ပိုင်း သူမဟာ ကိုယ်အလေး ချိန်တွေ တဖြည်းဖြည်းနဲ့ တက်လာ ပါတယ်။ ဒါကြောင့် သူမဟာ ခြောက် လအတွင်း ပေါင် ၇၀ ကျရန် ကြိုးစား ခဲ့ပါသေးတယ်။ ခွဲစ်ိတ်မှု ပြုလုပ်ပြီး အစာအိမ်ကို ကြိုးချည်ကာ ကိုယ် အလေးချိန် လျှော့ရန် စီစဉ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သူမရဲ့ သူငယ်ချင်း တစ် ယောက်ဟာ အထက်ပါ ခွဲစိတ်မှု မျိုး ပြုလုပ်ပြီး ဝိတ်လျှော့ လိုက်တာ သေဆုံး သွားတာကို သိလိုက်ရ တဲ့အခါမှာ သူမစိတ်ပြောင်း သွားပြီး ကိုယ်အလေး ချိန်လျှော့ရန် မကြိုးစားတော့ ဘဲကိုယ်အ လေးချိန်တိုး ဖို့သာ ကြိုးစား ပါတော့တယ်။ အဲဒီနောက်ပိုင်း သူမဟာ နောက်ထပ် အိမ်ထောင် ထပ်ပြုခဲ့ပြီး ကိုယ်ဝန်ထပ် ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ ကိုယ်အလေးချိန်တွေ သိပ်များနေတဲ့ အတွက် သူမရဲ့ ကိုယ်ဝန်ကို ဆရာဝန် ၁၉ ယောက် ပါဝင်တဲ့ ဆရာဝန်အဖွဲ့ က မွေးဖွားပေးခဲ့ရပါတယ်။ ထိုအချိန် က သူမ ၅၃၂ ပေါင်ရှိနေပြီး ကမ္ဘာ့ ကိုယ်အလေးချိန်အများဆုံး မိခင် ဖြစ်လာပါတယ်။ ယခုတော့ ကမ္ဘာ့ ကိုယ်အလေးချိန်အများဆုံး အမျိုးသမီး တစ်ဦးဖြစ်လာနေရန် ကြိုးစားနေပါ တယ်။
ဓါတ်ပုံတင်တာ တင်လို့မရဘူးဖြစ်နေတယ် …
ကိုယ်အလေးချိန်က သုံည တလုံးပိုနေတယ် ထင်တယ်။
ခေါင်းစဉ်ကြည့်ပြီးတော့ လန့်သွားတာပဲ … ဒီလောက်တောင်မှ ကြီးပါ့မလားလို့သံသယဖြစ်နေတာ…အန်တီဆူးပြောသလို ၀ တစ်လုံးပိုသွားတာကိုး။
၀ တလုံးပိုလို့၊မပိုရင်အစောကြီးကြွသွားနိုင်တယ်။ ၁၀၀၈ ပေါင်ဆိုလည်းမနဲဘူး၊ ၁၀၀၈ပေါင်=ပိသာ 280=၄၅၇ ကီလိုဂရမ်၊ ဂင်းနစ်ဘုတ်ဝင်ဖို့ကြိုးစားနေတာဖြစ်မယ်၊ လူတော်တော်များများဂင်းနစ်ဘုတ် ၀င်ဖို့ကြိုးစားကြတယ်၊ ဂင်နစ်ဘုတ်ဝင်ရင်ဘာတွေအကျိုးရှိလဲ။
ဟီးဟီး … ဟုတ်သားပဲ
ခုတလော ရွာထဲ..မူပိုင်ခွင့်တွေနဲ့ ပြသနာတက်နေတာ.. သတိမထားမိဘူးထင်တယ်..။
တခြားသူတွေရဲ့.. ကိုယ်တိုင်လုံ့လစိုက်ထုတ်ေ၇းထားတဲ့… စာတွေပြန်ဖတ်ပါဦးနော..။
April 2011 >> 105,706 Visits 517,611 Pageviews
သဂျီးပြောတော့ April 2011 >> 105,706 Visits 517,611 Pageviews ရှိတယ်ဒဲ့။ အဲသလိုဆိုရင် ပျမ်းမျှနေ့တိုင်း လူသုံးထောင် ဆိုက်ကိုဝင်ကြည့်မှ ဖြစ်မယ်။ ပြထားတဲ့ who’s online မီတာမှာတော့ သုံးလေးဆယ် ပျမ်းမျှပဲတွေ့ဒယ်။ သဂျီးက မမလေးထက်ဆိုးပြီး သုညနှစလုံး ပိုသွားသလား…
ဂိုဂယ်က..စာရင်းမို့ မှားစရာတော့ မရှိဘူး..။မနေ့ကဆို .. ၄၀၀၀ ကျော်လူလာတယ်..။
မီတာပြတာက.. ၅မိနစ်တခါ စစ်ပြနေတာ..။
ဆိုတော့..၀က်ဆိုက်ကို စက်ကန့်.. မိနစ်မလပ်လူရှိနေတဲ့သဘောပါပဲ..။
သြော် …. ကိုင်း … မေ့သွားလို့ ဆောဆော မနေ့ကအားနေတာနဲ့ ဟိုလျောက်ဝင် ဒီလျောက်ဝင်နဲ့ တွေ့လို့ … နောင်မမှားတော့ပါဘူးဗျ
ဟီးဟီး.. အ၀ ဆုံး စံချိန် တင်ချင်တဲ့ အမျိုးသမီး ဗိုက်ကြီးပူပြီး တွဲကျနေတာ..
အတွင်းခံ ဘောင်းဘီတောင် မပါရင် ဘယ်သူမှ သိမှာ မဟုတ်ဘူး။
အခုတောင် ပါရဲ့လား မသိဘူး။
ခုတောင်မပါဘူး မမဆူးရေ … ဘေးဘက်ကို သေချာကြည့်ကြည့်ပြီးသွားပြီ ဘာပိတ်စမှမတွေ့ရဘူး … အ၀တ်အစားဖိုး သက်သာတယ် … အ၀တ်အစားဖိုး မသက်သာချင်ကြဘူးလား ???
လှတာက ချက်စားလို့ မရဘူး ၀တာက ဖက်ထားလို့ရတယ်ဆို……….. သူတို့ပဲ အမျိုးမျိုး ……..။ ဟွန်း ပြောချင်ဘူး